Weedhaha Alan Greenspan: 40ka weedhood ee ugu fiican iyo taariikh nololeedkooda | Maaliyadda Dhaqaalaha
Xigashooyinka Alan Greenspan
Casudi casals | 04/08/2021 12:00 | Dhaqaalaha guud
Waxaa had iyo jeer lagu talinayaa in la helo aqoon cusub habka ugu wanaagsan ee tan loo samayn karaa waa in la yeesho maskax furan oo fiiro gaar ah la siiyo waxa ay khubaradu sheegaan. Sidaa darteed, Xigashooyinka Alan Greenspan aad bay waxtar ugu yeelan karaan adduunka maaliyadda. Waa dhaqaale yahan ku dhashay 1926 magaalada New York, gaar ahaan Manhattan. Qoyska Yuhuudda ah oo ka soo jeeda Hungarian iyo Romania labadaba, Greenspan wuxuu durbadiiba muujiyey xiisaha weyn ee muusigga iyo xisaabta isagoo aad u yar. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu doortay inuu naftiisa u huro xirfad ahaan tirooyinka.
In kasta oo uu ku guulaystay tacliintiisa, Alan Greenspan waxaa si gaar ah loogu yaqaanay shaqadiisa US Reserve Federal Reserve, halkaas oo uu maamule ka ahaa 1987 ilaa 2006. Ka sokow soo xigashada afartan weedhood ee ugu caansan Alan Greenspan, waxaan sidoo kale ka hadli doonnaa wax yar taariikhdiisa iyo guulaha uu ka gaaray madaxweynaha Kaydka Federaalka.
1 40ka weedhood ee ugu fiican Alan Greenspan
2 Waa kuma Alan Greenspan?
3 Guddoomiyaha Kaydka Federaalka
40ka weedhood ee ugu fiican Alan Greenspan
In kasta oo dhaqaalayahanku uusan had iyo jeer ku saxsanayn dhacdooyinka inta lagu jiro dhibaatooyinka, haddana wuxuu leeyahay waayo -aragnimo sannado badan xagga maaliyadda adduunka, isagoo aan ahayn wax ka yar oo aan ka yarayn madaxweynaha Kaydka Federaalka ee Mareykanka. Meeshaas, mid ka mid ah shaqooyinkeeda waxay ahayd kormeerka siyaasadda bangiga iyo lacagta. Sidaa darteed, xukunkiisa lama khasaariyo.
“Maqnaanshaha heerka dahabka ah, ma jirto si looga badbaado kaydinta in lala wareego sicir bararka awgiis. Ma jiro dukaan ammaan ah oo qiimo leh. "
"Haddii aadan rabin inaad tanaasul samayso, bulshadu ma wada noolaan karto."
"Runtii ma saadaalin karno wax walba oo sax ah, haddana waxaan iska yeelnaa inaan awoodno, laakiin runtii ma awoodno."
"Dabeecadda maaliyaddu waa inaysan faa'ido yeelan karin haddii si weyn looga faa'ideysto ... oo maadaama deyn aan jirin, waxay noqon kartaa maqnaansho iyo faafin."
"Waxsoosaarka Shiinaha ayaa ah kan ugu sarreeya adduunka, laakiin sida ay u sameeyaan waa iyadoo laga soo amaahdo farsamada dibadda, iyada oo loo marayo shirkado wadajir ah ama habab kale."
“Maraykanku wuu bixin karaa dayn kasta oo lagu leeyahay sababtoo ah mar walba wuu daabacan karaa lacag si uu sidaas u sameeyo. Markaa ma jirto wax eber ah oo ah lacag-la'aan. "
"Qiyaasta dhabta ah ee xirfadda ayaa ah inaad awooddo inaad ku faraxdo, xitaa ku faanto, inaad ku kasbatay dadaalkaaga adiga oo aan ka tagin raad dhibbaneyaasha soo jeedintaada."
“Suuqyadu waxay sameeyaan waxyaalo aad u la yaab leh maxaa yeelay waxay ka falceliyaan habdhaqanka dadka, mararka qaarkoodna dadku waxoogaa way ka yara fogaadaan.”
“Ilaalintu wax yar bay ka tari doontaa abuurista shaqooyinka oo haddii ajaanibtu aargoosi sameeyaan, hubaal waxaan waayi doonnaa shaqooyin.”
"Dhaqanka Giriiggu lama mid aha dhaqanka Jarmalka, oo ku biirinta hal unug waa mid aad u adag."
"Waxaan u malaynayaa inay tahay inaan kuu digo, haddii aan si cad u caddaado, malaha waxaad si khaldan u fasiratay waxaan idhi."
"Waxaa jira xad u dhexeeya inta khasnadda mareykanka ay amaahan karto."
"Deyn -bixiye kasta oo xog -ogaal ah ayaa si fudud ugu nugul khiyaanada iyo xadgudubka."
"Ma inkirayo in keli -talisnimadu ay tahay wax aad u xun, waxaan diidayaa inay tahay wax aad u fudud in lagu xaliyo sharci noocaas ah."
"Cabsidu waa awood aad uga xoog badan dabeecadaha aadanaha marka loo eego farxadda - waligey maan filayn taas ama ma siin fikrad daqiiqad ka hor, laakiin waxay ka muuqataa xogta siyaabo badan."
"Wax kasta oo aan samayn karno si aan u kordhinno keydinta shaqsiyadeed ayaa dan u ah dalkan."
"Maaliyaddu gebi ahaanba way ka duwan tahay dhaqaalaha intiisa kale."
“Wuxuu ahaa muusikiiste hiwaayad aad u wanaagsan, wuxuuna ahaa xirfadle dhexdhexaad ah. Laakiin waxa kaliya ee aan arkay waxay ahayd in ganacsiga burcadda uu meesha ka baxayo. ”
“Qofka aan ugu jeclaa wuxuu ahaa Gerald R. Ford. Wuxuu ahaa ninka ugu qumman xagga siyaasadda ee aan waligay la falgalay. ”
"Taariikhdu si naxariis leh uma dhaqmin gunnooyinka muddada-dheer ee khatarta hoose leh."
"Haddii aad canshuurto, wax yar baad heli doontaa."
“Markaad dib u laabato oo aad eegto taariikhda Mareykanka, aad ugama duwana taariikhda Kanada. Haddii aadan iskaga filnayn dhulka bannaan, ma noolaan lahayd. ”
"Dhab ahaantii, waa inaan ka dhignaa nidaamka helidda lacag -bixinta ruuxa ee lagu dhisay hareeraha aaminaadda mid dhab ah."
"Kacaannadu waa wax aad ku aragto oo kaliya gadaal."
"Aad ayaan u dhexgalaa markaan qabo dhibaato aan la xallin karin oo aanan iska dhaafi karin waxa aan sameynayo - waxaan sii wadaa fikirka iyo fekerka mana joojin karo."
"Had iyo jeer waxaan isu haystaa in aan ka badan ahay xisaabiye marka loo eego cilmi -nafsiga."
«Waxaan nahay bulsho dimuqraadi ah. Xiritaanka dowladda waa inaysan ku xirnaan. "
"Aad bay u adag tahay in la saadaaliyo marka xiisadda dammaanaddu dhici karto."
“Way adag tahay in la ogaado hantida sumayn doonta. Habka ugu wanaagsan ayaa ah in la hubiyo in bangiyada iyo saamileyda oo kaliya ay dareemaan inay tahay raasamaal ku filan. ”
"Waa inaad dhab ahaantii fidisaa malahaaga si aad u ogaato waxa qiimaha gaarka ah ee Bitcoin yahay. Ma aanan sameyn karin. Waxaa laga yaabaa in qof kale awoodo.
"Ruushka dhexdiisa, diblomaasiyaddu aad bay uga yar tahay dhaqdhaqaaqyada kaydka suuqa."
"Hanti -wadaagnimada Buddy asal ahaan waa shuruud ay mas'uuliyiinta dawladdu u fidinayaan dadka ku jira ganacsiga gaarka loo leeyahay si ay u bixiyaan lacago siyaasadeed."
"Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee Shiinaha ka jira ayaa ah in hal -abuurnimadiisa ay tahay tiknoolajiyad la amaahiyey oo badan."
"Dhibaatadu waxay tahay inaysan jiri karin ganacsi xor ah oo caalami ah oo leh suuqyo gudaha ah oo aad u xaddidan oo nidaamsan."
"Waxaan ahay dhaqaaleyahan suuqa xorta ah sannado iyo sannado, weligayna kama leexan arrintaas."
"Cabsida si aan kala go 'lahayn oo adduunka oo dhami waxay keenaysaa ballan -qaad la'aan, iyo ballan -qaad la'aantu waa kala qaybsanaan shaqo oo taban."
"Ma jiro shaqo kale oo nolosha dadweynaha ah sida Guddoomiyaha Fed."
"Laga soo bilaabo 1948 waxaan maalin walba ku fikirayay sida adduunyada dhaqaalaha iyo siyaasadda ay isu beddeleen."
«Ujeeddada siyaasigu waa inuu noqdo hoggaamiye. Siyaasi waa in uu hoggaamiyo. Haddii kale si fudud waa raacsane. ”
"Ujeeddada dhexe ee waxa aan ka qabanayno dowladda federaalka waa inaan ka ilaalinno sicir -bararka inuu dardar -geliyo - waxaana doorbidaya inuu hoos u dhaco."
Waa kuma Alan Greenspan?
Sidaan hore u soo sheegnay, Alan Greenspan waa dhaqaaleyahan New York. Laakiin si aan u fahanno weedhihiisa, aan waxyar ka hadalno xirfadiisa waxbarasho. Waad ku mahadsan tahay xirfadiisa weyn ee tirooyinka iyo xogta, Greenspan wuxuu ka qaatay shahaadada dhaqaalaha 1948 Jaamacadda New York. Isla goobtaas ayuu ku qaatay dhakhtar isla maadadaas, 29 sano kadib, 1977kii. Qoraalkiisu wuxuu daboolay arrimo kala duwan, sida kororka qiimaha guryaha iyo saamaynta ay tani ku yeelatay isticmaalka, ama muuqaalka xumbo guriyeyn oo sii kordhaysa.
Benjamin Graham Xigasho
Waxaa kale oo xusid mudan inuu markii hore isku dayay inuu qaato Ph.D. Jaamacadda Columbia ka hor inta uusan ku tijaabin Jaamacadda New York, laakiin uu ka quustay. Si kastaba ha ahaatee, muddadan ayaa isaga muhiimad weyn u lahayd, tan iyo markii uu la jaanqaaday dhaqaalayahannada aadka loo yaqaan sida Benjamin Graham, oo xilligaas wax barayay, iyo Warren Buffet, oo markaas arday ahaa. Intaa waxaa dheer, wuxuu helay saamayn kale intii lagu jiray waqtigan, kuwaas oo fikradaha Arthur Burns ay ka sarreeyaan wax walba. Kuwani waxay salka ku hayeen diidmo xagjir ah oo ka dhan ah dhimista miisaaniyadda sababta oo ah xiriirka ay la leedahay sicir -bararka.
Guddoomiyaha Kaydka Federaalka
Sannadkii 1987, Alan Greenspan wuxuu beddelay Paul Volcker oo ah Guddoomiyaha Kaydka Federaalka ee Mareykanka. Nasiib wanaag ama nasiib darro, waqti yar ka dib waxaa bilaabmay mashaqadii weynayd ee '87. Thanks to this event, Greenspan wuxuu helay sumcad iyo muhiima badan tan iyo markii kaalinteedii loo arkay inay lama huraan tahay si loo helo isku -dhafka maaliyadeed ee Mareykanka. Wuxuu ku guulaystay inuu heshiisyo gaar ah la gaaro Xisbiga Jamhuuriga Maraykanka iyo Xisbiga Dimuqraadiga labadaba. Tani waxay Greenspan ka caawisay inay soo afjarto hagitaanka bangiyada iyo kormeerka siyaasadda lacagta. Maxaa ka sii badan, helay awoodda lagu beddeli karo dulsaarka. Sidaad arki karto, weedhaha Alan Greenspan waxaa ka buuxa waayo -aragnimo kala duwan.
Markii suuqa saamiyada Wall Street uu hoos u dhacay 20% waxyar ka dib markii loo magacaabay guddoomiyaha Kaydka Federaalka, Alan Greenspan waa inuu si dhaqso leh uga falceliyaa, nidaamka maaliyadeed ayaa halis u ahaa inuu burburo. Dhaqaale -yaqaanka New York wuxuu kaga jawaabay dhacdadan xawaare aad u weyn wuxuuna sheegay in Kaydka Federaalka ee Mareykanka uu bixin doono dareeraha lagama maarmaanka u ah dammaanadda dayactirka nidaamka maaliyadeed.
Xigashooyinka Warren Buffett
Wali, go'aamada Alan Greenspan ee ku saabsan dulsaarka waxay mar walba saamayn weyn ku yeelan jireen suuqyada. Sababtaas awgeed, saamaynta go'aammada uu ninkani ka qaatay bacaha ayaa aad u qiimo badnaa.
Iyadoo 19 sano oo waayo -aragnimo ah uu ahaa madaxweynaha Kaydka Federaalka ee Maraykanka, iyoDhaqaalayahankan New York wuxuu buuxiyey dhammaan shuruudihii lagu noqon lahaa qof caan ka ah adduunka maaliyadda. Hadda oo aad taqaanno weedhaha waaweyn ee Alan Greenspan iyo xirfadiisa, waxaan rajaynayaa inaad taqaanid sida aad uga heli karto xoogaa faaiido iyo dhiirigelin ah. Xusuusnow in helidda aqoon dheeri ahi ay mar walba hodan noqon doonto oo waxtar u yeelan doonto dhinac kasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Xigashooyinka Alan Greenspan
Palladium: Ka qiimo badan dahabka
Waa maxay dheefta waxtarka leh